ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်လက်တစ်ကမ်းတွင်ရှိသည် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်တည်လုနီးပြီ၊
“နောင်တရလော့၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် နီးသည်ဖြစ်၍၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နှင့် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ နီးကပ်မှုကို ကြေငြာခဲ့သည် (မဿဲ 3,2; 4,17; မားကပ် 1,15) ကြာမြင့်စွာ စောင့်မျှော်ခဲ့သော ဘုရားသခင် ၏ စိုးစံချိန် နီးလာပြီ။ ဤသတင်းစကားကို ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်း ဟုခေါ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတို့သည် ယောဟန်နှင့်ယေရှုထံမှ ဤသတင်းစကားကိုကြားပြီး တုံ့ပြန်လိုစိတ်ပြင်းပြခဲ့ကြသည်။
သို့သော်“ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်နှစ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ကွာဝေးသည်” ဟုသူတို့ဟောလျှင်သူတို့မည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုခဏစဉ်းစားပါ။ အဆိုပါသတင်းစကားစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ရလိမ့်မယ်နှင့်အများပြည်သူတုံ့ပြန်မှုလည်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ သခင်ယေရှုသည်လူကြိုက်များလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်မနာလိုခြင်း၊ ယေရှုအားကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းမပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ “ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ဝေးလံသည်” မဟုတ်ပါ။ အသစ်လည်းမဟုတ်၊ ကောင်းသောလည်းမဟုတ်ပါ။
ယောဟန်နှင့်ယေရှုတို့သည်လာလတ္တံ့သောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောသူများ၊ နားထောင်သူများအတွက်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းအကြောင်းဟောပြောခဲ့သည်။ ဒီသတင်းစကားကလူတွေအခုဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်။ ဒါကြောင့်ချက်ချင်းဆက်စပ်မှုနှင့်အရေးတကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအကျိုးစီးပွားနှိုးဆော်ခြင်း - နှင့်မနာလို။ အစိုးရနှင့်ဘာသာရေးအယူဝါဒပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကြောင်းကြေငြာခြင်းဖြင့်သံရုံးသည်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ပထမရာစုတွင်နေထိုင်သောဂျူးများစွာသည်“ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်” ဟူသောဝေါဟာရကိုသိကြသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်အားရောမအုပ်စိုးမှုမှဖယ်ရှားပြီးယုဒပြည်ကိုလွတ်လပ်သောလူမျိုး၊ တရားမျှတမှု၊ ဘုန်းအသရေနှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည့်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ကိုစေလွှတ်စေလိုသည်။
ဤရာသီဥတုတွင်—ဘုရားသခင့်စီမံဆောင်ရွက်ချက်အတွက် စိတ်အားထက်သန်သော်လည်း မရေမတွက်နိုင်သောမျှော်လင့်ချက်များ—ယေရှုနှင့်ယောဟန်သည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏နီးကပ်မှုကို ဟောပြောခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီ” ဟုတပည့်တော်များအား ယေရှုက ဖျားနာသူများကို ကုသပေးပြီးနောက် (မဿဲ၊ 10,7; လုကာ ၂9,9.11) ။
ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ထားတဲ့အင်ပါယာမပြည့်စုံခဲ့ပါဘူး။ ဂျူးလူမျိုးပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သည်ဖျက်ဆီးခံရပြီးဂျူးလူမျိုးများကွဲလွင့်သွားသည်။ ဂျူးမျှော်လင့်ချက်မပြည့်မှီသေးပါ။ သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကား၌မှားပါသလား။
ယေရှု၏နိုင်ငံတော်သည် လူကြိုက်များသောမျှော်လင့်ချက်အတိုင်း အသက်မရှင်ခဲ့ပေ။ သူ၏နိုင်ငံသည် ဤလောကနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ (ယော၊ ၁8,36) “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်” အကြောင်းပြောသောအခါ လူတို့ကောင်းစွာနားလည်နိုင်သောအသုံးအနှုန်းများကိုသုံးသော်လည်း အဓိပ္ပာယ်အသစ်ကိုပေးတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာ လူအများစုမမြင်နိုင်ဘူးလို့ နိကောဒင်ကိုပြောခဲ့တယ်။ (ယော 3,3) - ၎င်းကိုနားလည်ရန် သို့မဟုတ် တွေ့ကြုံခံစားရန်၊ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရပါမည် (း၆)။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်ရေးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
သံလွင်တောင်ပေါ်ရှိ ပရောဖက်ပြုချက်တွင် ယေရှုသည် အချို့သောနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကြွလာမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော် ယေရှု၏သွန်သင်ချက်များနှင့် ပုံဥပမာအချို့က ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနည်းလမ်းဖြင့် လာမည်မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ အစေ့သည် တိတ်ဆိတ်စွာ ပေါက်တတ်သည် (မာကု 4,26စာ-၂၉); နိုင်ငံတော်သည် မုန်ညင်းစေ့ကဲ့သို့ သေးငယ်သည် (း၃၀-၃၂) နှင့် တဆေးကဲ့သို့ ဝှက်ထားသည် (မဿဲ ၁။3,33) ဤပုံဥပမာများသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် တန်ခိုးကြီးပြီး ရှုတ်ချဖွယ်နည်းလမ်းဖြင့် မပေါ်ပေါက်မီ လက်တွေ့ကျကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ ၎င်းသည် အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်မှန်အပြင် ယခုလက်တွေ့ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အလုပ်ဖြစ်နေပြီဟု ဖော်ပြသော ကျမ်းပိုဒ်အချို့ကို ကြည့်ကြပါစို့။ မာကုတွင်၊ 1,15 သခင်ယေရှုက “အချိန်စေ့ပြီ… ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် နီးပြီ” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ကြိယာနှစ်ခုစလုံးသည် အတိတ်ကာလတွင် တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း၏အကျိုးဆက်များသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ကြေငြာခြင်းအတွက်သာမက ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်ပါ အချိန်ရောက်လာပါသည်။
နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ပြီးနောက် ယေရှုက “ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် နတ်ဆိုးများကို ငါနှင်ထုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင်တို့အပေါ်သို့ ရောက်လေပြီ” (မဿဲ ၁။2,2; လု 11,20) နိုင်​ငံ​တော်​သည်​ဤ​တွင်​ရှိ​ပြီး​နတ်​ဆိုး​များ​ကို​ထုတ်​လွှတ်​ခြင်း​၌​သက်​သေ​ရှိ​သည်​ဟု​မိန့်​တော်​မူ​၏။ အသင်းတော်သည် သခင်ယေရှုထက် သာ၍ကြီးသောအမှုများကို လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ယနေ့အသင်းတော်တွင် ဤအထောက်အထားများ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ (ယော၊ ၁4,12) ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဤအရပ်နှင့် ယခုပင် အလုပ်ဖြစ်နေပြီဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် စာတန်၏နိုင်ငံတော်အပေါ် ၎င်း၏အမိန့်အာဏာကို ဆက်လက်ပြသနေပါသည်။
စာတန်သည် သြဇာလွှမ်းမိုးဆဲဖြစ်သော်လည်း၊ သူသည် ရှုံးနိမ့်ပြီး ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းခံခဲ့ရသည် (ယော ၁6,11) သူ့ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ (မာ 3,27) ယေရှုသည် စာတန်၏လောကကို အောင်နိုင်သည် (ယော ၁6,33) ဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ ငါတို့လည်း သူတို့ကို ကျော်လွှားနိုင်တယ်။1. ဂျိုဟန် 5,4) ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက သူတို့ကို မကျော်လွှားနိုင်ပါဘူး။ ဤခေတ်တွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် အကောင်းနှင့်အဆိုး နှစ်မျိုးလုံးပါရှိသည်။ (မဿဲ ၁3,24စာ-၃၀။ ၃၆-၄3. ၂၇၀၆၀-၅၈၂၂၀; ၁၀၁၂၁၁၀၆၀၀4,45-51; ၂၈.၃5,1-12. ၁၄-၃၀)။ စာတန်သည် သြဇာရှိဆဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ ဘုန်းကြီးသောအနာဂတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေဆဲဖြစ်သည်။
“ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ယနေ့တိုင်အောင် ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရ၍ ကြမ်းတမ်းသောသူတို့သည် ၎င်းကို သိမ်းယူသည်” (မဿဲ၊ 11,12) ဤကြိယာများသည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင်ဖြစ်သည်—ယေရှုလက်ထက်တွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် တည်ရှိခဲ့သည်။ အပြိုင်ကျမ်းပိုဒ်၊ လုကာ ၁6,16၊ ပစ္စုပ္ပန်ကာလကြိယာကိုလည်း သုံးသည်- "... လူတိုင်း သူ့လမ်းကို တွန်းပို့သည်"။ ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘာကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုကို သုံးကြတာလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့ ရှာဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
လုကာ ၁6,16 ကျမ်းပိုဒ်၏ပထမပိုင်းကို "ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိတရားဟောသည်" နှင့်အစားထိုးသည်။ ဤပုံစံကွဲလွဲမှုသည် ဤခေတ်တွင် နိုင်ငံတော်၏တိုးတက်မှုသည် ၎င်း၏ကြေငြာချက်နှင့်အနီးစပ်ဆုံးလက်တွေ့ကျသောအခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်-၎င်းတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်-နှင့်၎င်း၏ကြေငြာချက်မှတဆင့်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။
Markus တွင် 10,1၅၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဤဘဝတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လက်ခံရမည့်အရာဖြစ်ကြောင်း ယေရှုညွှန်ပြခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် မည်သို့တည်ရှိသနည်း။ အသေးစိတ်ကိုတော့ မရှင်းလင်းသေးပေမယ့် ကြည့်လိုက်တဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေက ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖာရိရှဲအချို့က သခင်ယေရှုအား ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ဘယ်အချိန်လာမည်ကို မေးခဲ့သည် (လုကာ ၁ ကော7,20) မမြင်ရဘူး လို့ ယေရှု ပြန်ဖြေတယ်။ သို့သော် ယေရှုကလည်း “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင့်အတွင်း၌ရှိ၏ [က. ü။ သင်တို့တွင်]” (လုကာ ၁ ကော7,21) ယေရှုသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့တွင် နိမိတ်လက္ခဏာများကို သွန်သင်ကာ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်သည် ဖာရိရှဲများကြားတွင် ရှိသည်။ ယေရှုသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင်ရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ယေရှု၏ဓမ္မအမှုတွင် ရှိနေသကဲ့သို့၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် သူ၏အသင်းတော်၏ဓမ္မအမှုတွင် ရှိနေပါသည်။ ရှင်ဘုရင်သည် ငါတို့တွင်ရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အပြည့်အဝမလည်ပတ်သေးသည့်တိုင် သူ၏ဝိညာဉ်ရေးစွမ်းအားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းတွင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်သည်။ (ကောလောသဲ၊ 1,13) ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတော်ကို လက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ယင်းကို ရိုသေခြင်းနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၁ ကော၊2,28) ခရစ်တော်သည် “ငါတို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်နိုင်ငံဖြစ်စေ” (ဗျာ 1,6) ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုနှင့် ယခုလက်ရှိတွင် သန့်ရှင်းသောလူများဖြစ်ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ဖြစ်ရမည်ကို မဖော်ပြသေးပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်တရား၏အုပ်စိုးမှုမှ ကယ်နုတ်ပြီး သူ၏အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏နိုင်ငံတော်တွင် နေရာချပေးခဲ့သည်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​နိုင်​ငံ​တော်​သည် ဤ​အ​ရပ်​၌​ရှိ​သည်​ဟု​ယေ​ရှု​မိန့်​တော်​မူ​၏။ သူ၏ တရားနာသူများသည် မေရှိယကို အနိုင်ယူရန် စောင့်ဆိုင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် စိုးစံပြီးဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခု သူ၏လမ်းစဉ်အတိုင်း နေထိုင်သင့်သည်။ ငါတို့တွင် နယ်မြေမရှိသေးသော်လည်း၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် လာနေကြပြီ။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်ကို နားလည်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားသူများကို အမှုဆောင်ရန် ပိုမိုအာရုံစိုက်စေပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ပြည့်စုံလာမည့်အချိန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မမေ့ပါနှင့်။ ငါတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်က ဒီခေတ်မှာ တစ်ယောက်တည်းရှိနေရင် ငါတို့မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ သိပ်မရှိဘူး (1. ကောရိန္သု ၁5,19) လူသား၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ယူဆောင်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထင်ယောင်ထင်မှားမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတ်ယုတ်မှုများနှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ လူအများစုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ငြင်းပယ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသောအခါ၊ နိုင်ငံတော်၏ ပြည့်စုံမှုသည် အနာဂတ်ကာလတွင် ဖြစ်မည်ဟူသော အသိပညာမှ ခွန်အားကို ရယူကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ကိုယ်တော့်နိုင်ငံတော်ကိုထင်ဟပ်သောလမ်းစဉ်အတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေဤလောကကိုဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ဤသည်သိသိသာသာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှတဆင့်လာရန်ရှိသည်။ Apocalyptic ဖြစ်ရပ်များသည်ခေတ်သစ်ကိုရရှိရန်လိုအပ်သည်။
မြောက်မြားစွာသောကျမ်းပိုဒ်များသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဘုန်းကြီးသောအနာဂတ်အမှန်တရားဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြသည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပြီး လူသား၏ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုအဆုံးသတ်ရန် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကိုယ်တော်၏တန်ခိုးတော်ကို အသုံးပြုမည့်နေ့ရက်ကို ကျွန်ုပ်တို့တောင့်တကြသည်။ ဒံယေလကျမ်းက မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကို အုပ်စိုးမည့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ကြိုပြောထားသည်။ (ဒံယေလ၊ 2,44; 7,13-14. ၂၂)။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် သူ၏ရောက်ရှိလာခြင်းကို ဖော်ပြသည် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း 11,15; 19,11-16) ။
နိုင်​ငံ​တော်​ဖြစ်​စေ​ရန်​ငါ​တို့​ဆု​တောင်း​ကြ​လော့။ (လု 11,2) စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်းပြီး နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများသည် ၎င်းတို့၏အနာဂတ် “ကောင်းကင်၌ဆုလာဘ်” ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။ (မဿဲ၊ 5,3.၁၀.၁၂). အနာဂတ် "တရားစီရင်ရာနေ့" တွင် လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်ရှိလာကြသည် (မဿဲ 7,21စာ-၂၃; လုကာ ၁3,22စာ-၃၀)။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် တန်ခိုးအာဏာရရှိတော့မည်ကို အချို့က ယုံကြည်သောကြောင့် ပုံဥပမာတစ်ခုကို ပြောပြခဲ့သည် (လုကာ ၁ ကော၊9,11) သံလွင်တောင်ပေါ်ရှိ ပရောဖက်ပြုချက်တွင်၊ ယေရှုသည် တန်ခိုးနှင့် ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ပြန်ကြွလာခြင်းမပြုမီတွင် ဖြစ်ပျက်မည့် အဖြစ်အပျက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကားစင်တင်မခံရမီ မကြာမီတွင်၊ ယေရှုသည် အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို စောင့်မျှော်ခဲ့သည် (မဿဲ ၂6,29).
ပေါလုသည် အနာဂတ်အတွေ့အကြုံအဖြစ် “နိုင်ငံတော်ကို အမွေဆက်ခံခြင်း” အကြောင်းကို အကြိမ်များစွာပြောခဲ့သည်။1. ကောရိန္သု 6,9-10; ၂၈.၃5,50; ဂလာတိ 5,21; ဧဖက် 5,5) နှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ခေတ်အဆုံးတွင်သာ အကောင်အထည်ဖော်ရမည့်အရာအဖြစ် သူမှတ်ယူကြောင်း သူ၏ဘာသာစကားဖြင့် ဖော်ပြသည်။2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,12; 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 1,5; ကောလောသဲမြို့ 4,11; 2. တိမောသေ 4,1.၁၈)။ ပေါလုသည် နိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိပေါ်ထွန်းခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သောအခါ၊ သူသည် “ဖြောင့်မတ်ခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်” နှင့်အတူ မိတ်ဆက်လေ့ရှိသည် (ရောမ ၁၊4,17) သို့မဟုတ် ၎င်း၏နေရာတွင် အသုံးပြုရန် (ရောမ 1,17) Matthew ကိုကြည့်ပါ။ 6,33 ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သို့မဟုတ် ပေါလု (တနည်းအားဖြင့်) ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်ကို ခရစ်တော်နှင့် ပေါင်းသင်းလေ့ရှိသည် (ကောလောသဲ၊ 1,13) (J. Ramsey Michaels, "The Kingdom of God and the Historical Jesus", အခန်း 8၊ The Kingdom of God in 20th-Century Interpretation, Wendell Willis [Hendrickson, 1987], စာမျက်နှာ 112)။
“ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်” ကျမ်းများစွာသည် လက်ရှိဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် အနာဂတ်ပြည့်စုံမှုကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် ဥပဒေချိုးဖောက်သူများသည် အငယ်ဆုံးဟု ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည် (မဿဲ 5,19စာ-၂၀)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက် မိသားစုများကို ထားခဲ့သည် (လုကာ ၁ ကော8,29) ဆင်းရဲဒုက္ခအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝင်ရောက်ကြသည် (တမန်တော် ၁ ကော4,22) ဤဆောင်းပါးတွင် အရေးကြီးသောအချက်မှာ အချို့အခန်းငယ်များကို ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားထားပြီး အချို့မှာ အနာဂတ်ကာလတွင် ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် တပည့်တော်များက “သခင်၊ ယခုအချိန်၌ ဣသရေလအမျိုး၌ နိုင်ငံတော်ကို ပြန်ပေးမည်လော” ဟုမေးလျှောက်ကြ၏။ (တမန် 1,6) ထိုမေးခွန်းကို ယေရှု မည်သို့ဖြေသင့်သနည်း။ “နိုင်ငံတော်” ဟူသည့် တပည့်များဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုသွန်သင်ခဲ့သည့်အရာမဟုတ်ပေ။ တပည့်များသည် တိုင်းရင်းသားအားလုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော တဖြည်းဖြည်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူများထက် အမျိုးသားနိုင်ငံတစ်ခု၏ အကြောင်းကို တွေးတောနေကြဆဲဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သစ်တွင် လူမျိုးခြားများကို ကြိုဆိုကြောင်း သိရှိရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်သည် ဤလောကနှင့်မသက်ဆိုင်သေးသော်လည်း ဤခေတ်တွင် တက်ကြွနေသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်ကို မပြောဘဲ၊ သူတို့အတွက် အလုပ်နှင့် ထိုအလုပ်ကို လုပ်ရန် တန်ခိုးရှိနေသည်ဟုသာ ပြောခဲ့သည် (း၇-၈)။
မဿဲ ၂5,34 ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာတည်ကတည်းက ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေပေမယ့် တလျှောက်လုံး အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေတယ်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝအတွက် ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အုပ်စိုးခြင်းအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ဧဒင်ဥယျာဉ်၌ မှူးမတ်များဖြစ်ကြ၏။ “နိုင်ငံတော်” ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးမပြုသော်လည်း အာဒံနှင့်ဧဝသည် သူ၏အုပ်စိုးမှုနှင့် ပိုင်နက်မှုအောက်တွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ရှိနေခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား သူ၏သားမြေးများထံမှ ကြီးမြတ်သောလူမျိုးဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရင်များ ကြွလာမည်ဟု ကတိပေးသောအခါ (1. မောရှေ ၁7,5(၆) ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​နိုင်​ငံ​တော်​ကို က​တိ​ပြု​တော်​မူ​၏။ ဒါပေမဲ့ မုန့်စိမ်းထဲက တဆေးလို သေးငယ်လာပြီး ကတိတော်ကို ရဖို့ နှစ်ရာနဲ့ချီ ကြာခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နှုတ်ဆောင်၍ သူတို့နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့သောအခါ၊ သူတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။2. မောရှေ ၁9,6) ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနိုင်ငံ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သူတို့နဲ့ သူဖွဲ့ထားတဲ့ ပဋိညာဉ်ဟာ နိုင်ငံငယ်တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တန်ခိုးကြီးတဲ့ ဘုရင်တွေနဲ့ ဆင်တူတယ်။ သူသည် သူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး၊ ဣသရေလလူတို့သည် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်- သူတို့သည် သူ၏လူဖြစ်ရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သည်။1. ရှမွေလ ၂2,12; 8,7) ဒါဝိဒ်နှင့် ရှောလမုန်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် ထိုင်ကာ နာမတော်ဖြင့် စိုးစံကြသည် (၁ရာ9,23) ဣသရေလသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့ လူတွေက သူတို့ရဲ့ ဘုရားသခင်ကို မနာခံကြဘူး။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို လွှတ်လိုက်သော်လည်း စိတ်နှလုံးသစ်ဖြင့် လူမျိုးကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကတိပြုခဲ့သည် (ယေရမိ ၃ ကော1,31(၃၃) ပဋိညာဉ်သစ်တွင် ပါ၀င်သော ယနေ့အသင်းတော်၌ ပြည့်စုံသော ပရောဖက်ပြုချက်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ပေးအပ်ခြင်းခံရသော ငါတို့သည် ရှေးအစ္စရေးတို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်သော တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖွဲ့နှင့် သန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်သည်။1. ဓာတ်ဆီ 2,9; 2. မောရှေ ၁9,6) ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ရှိကြသော်လည်း၊ ယခုစပါးပင်တို့တွင် ပေါင်းပင်များ ပေါက်နေပါသည်။ ခေတ်ကာလ၏အဆုံးတွင်၊ မေရှိယသည် တန်ခိုးနှင့်ဘုန်းအသရေဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် တစ်ဖန်အသွင်အပြင်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း ပြီးပြည့်စုံပြီး ဝိညာဉ်ရေးရာ စုံလင်သော ထောင်စုနှစ်၏နောက်သို့ လိုက်သော နိုင်ငံသည် ထောင်စုနှစ်နှင့် သိသိသာသာ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
နိုင်ငံတော်သည် သမိုင်းအဆက်အစပ်ရှိသောကြောင့် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ကာလတို့ကို မှန်ကန်စွာ ပြောဆိုတတ်ပါသည်။ ၎င်း၏ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အဆင့်သစ်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းတွင် ကြီးမားသော မှတ်တိုင်များ ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သိနာတောင်ပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ ယေရှု၏အမှုတော်အားဖြင့် တည်၏။ စီရင်ပြီးမှ၊ ပြန်လာသောအခါ၊ အဆင့်တစ်ခုစီတွင်၊ ဘုရားသခင်၏လူများသည် သူတို့၌ရှိသောအရာ၌ ​​ရွှင်လန်းကြပြီး နောင်လာမည့်အရာများတွင် ပို၍ပင် ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ ကန့်သတ်ချက်အချို့ကို တွေ့ကြုံခံစားရသည်နှင့်အမျှ နောင်လာမည့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်လည်း လက်တွေ့ဖြစ်လာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုရရှိလာပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သာ၍ကောင်းချီးများ အာမခံချက်ဖြစ်သည် (2. ကောရိန္သု 5,5; ဧဖက် 1,14).
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်ဟူသောစကားလုံးကိုကြားရလျှင်ဤလောက၏တိုင်းပြည်များကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရစေသည်။ ဤလောက၌နိုင်ငံတော်သည်အာဏာနှင့်အာဏာရှိသော်လည်းသဟဇာတနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်သူ၏မိသားစုတွင်ဘုရားသခင်၌ရှိသည့်အခွင့်အာဏာကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရရှိထားသည့်ကောင်းချီးများအားလုံးကိုဖော်ပြမထားပါ။ ထို့ကြောင့်ဘုရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အခွင့်အာဏာကိုအလေးပေးသောမိသားစုအသုံးအနှုန်းများကဲ့သို့သောအခြားရုပ်ပုံများကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။
အသုံးအနှုန်းတစ်ခုစီသည်တိကျသော်လည်းမပြည့်စုံပါ။ မည်သည့်အသုံးအနှုန်းကမဆိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြည့်စုံစွာဖော်ပြနိုင်လျှင်သမ္မာကျမ်းစာသည်ထိုအသုံးအနှုန်းကိုတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်ရုပ်ပုံများဖြစ်ပြီးတစ်ခုစီသည်ကယ်တင်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ထိုအသုံးအနှုန်းများသည်ရုပ်ပုံတစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ the ၀ ံဂေလိတရားကိုဟောရန်ဘုရားကျောင်းကိုဘုရားသခင်ကတာ ၀ န်ပေးသောအခါ“ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်” ဟူသောစကားလုံးကိုသာအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ တမန်တော်များသည်ယေရှု၏မိန့်ခွန်းများကိုအာရမိတ်ဘာသာစကားမှဂရိသို့ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးဂျူးမဟုတ်သောပရိသတ်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအခြားရုပ်ပုံများ၊ မဲ၊ မာကုနှင့်လုကာသည်“ နိုင်ငံတော်” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ယောဟန်နှင့်တမန်တော်တို့၏စာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကိုလည်းဖော်ပြသော်လည်း၎င်းကိုအခြားရုပ်ပုံများဖြင့်သာဖော်ပြသည်။
ကယ်တင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်း (ဧဖက် 2,8) ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။2. ကောရိန္သု 2,15ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ (ရောမ၊ 5,9) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခြင်းပေးထားပြီး ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား တုံ့ပြန်ရန် ကိုယ်တော်မျှော်လင့်ထားသည်။ ယောဟန်သည် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ထာဝရအသက်အကြောင်းကို ပစ္စုပ္ပန်အဖြစ်မှန်၊1. ဂျိုဟန် 5,11-12) နောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။
ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင့်မိသားစုကဲ့သို့ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကဲ့သို့သောဥပစာစကားများသည်တရားဝင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ospel ၀ ံဂေလိတရားကိုနိုင်ငံတော်၏ ospel ၀ ံဂေလိတရား၊ ကယ်တင်ခြင်း,ဝံဂေလိတရား၊ ကျေးဇူးတော်၏Godဝံဂေလိတရား၊ ဘုရားသခင်၏ospelဝံဂေလိတရား၊ ထာဝရအသက်၏theဝံဂေလိတရားစသည်တို့ကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ၀ ံဂေလိတရားသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူထာဝစဉ်အသက်ရှင်နိုင်သည်ဟုကြေငြာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်း ယေရှုပြောသောအခါတွင် ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းချီးများကို အလေးပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် ၎င်း၏အချိန်ဇယားကိုလည်း မရှင်းလင်းခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား သူပါဝင်ဖို့ လူတွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာကို အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ အခွန်ခံများနှင့် ပြည့်တန်ဆာများသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်ရှိလာသည်ဟု ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည် (မဿဲ ၂1,31) ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ပြီး ခမည်းတော်၏အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် (း၂၈-၃၁)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သစ္စာရှိရှိ တုံ့ပြန်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ကြသည်။
မာကု ၁၀ တွင် လူတစ်ဦးသည် ထာဝရအသက်ကို အမွေခံလို၍ ပညတ်တော်များကို စောင့်ရှောက်ရန် ယေရှုက မိန့်တော်မူသည် (မာ 10,17စာ-၁၉)။ သခင်ယေရှုက နောက်ထပ်ပညတ်တစ်ခု ထပ်တိုးခဲ့သည်– ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာအတွက် မိမိပိုင်ဆိုင်သမျှကို စွန့်လွှတ်ရန် မိန့်မှာခဲ့သည် (း၂၁)။ သခင်ယေရှုက “ငွေရတတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရန် မည်မျှခက်ခဲလိမ့်မည်” ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (း၂၃)။ တပည့်တော်တို့က၊ သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်သနည်းဟု မေးလျှောက်ကြ၏။ (း ၂၆)။ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် လုကာ ၁ ၌ မျဉ်းပြိုင်ကျမ်းပိုဒ်8,18-30၊ တူညီသောအရာကို ရည်ညွှန်းသော ဝေါဟာရများစွာကို အသုံးပြုသည်- နိုင်ငံတော်ကို ခံယူပါ၊ ထာဝရအသက်ကို အမွေခံပါ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘဏ္ဍာကို သိမ်းဆည်းပါ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ပါ၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပါ။ သခင်ယေရှုက “ငါ့နောက်သို့ လိုက်လော့” (း၂၂) ဟု မိန့်တော်မူသောအခါ တူညီသောအရာကို ညွှန်ပြရန် ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်– ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ဦးတည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ကြသည်။
လုကာ ၁2,31-၃၄၊ များစွာသောအသုံးအနှုန်းများသည် ဆင်တူကြောင်း ယေရှုညွှန်ပြသည်- ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုရှာပါ၊ နိုင်ငံတော်ကိုရယူပါ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘဏ္ဍာရှိပါ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကို ယုံမှားခြင်းအား စွန့်လွှတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏သွန်သင်ချက်ကို တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကို ရှာဖွေကြသည်။ လုကာ ၂1,28 30 ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။ တမန်တော် 20,22:32 တွင် ပေါလုသည် နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိရပါသည်။ နိုင်ငံတော်သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်စပ်နေသည် - ကျွန်ုပ်တို့ မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါက နိုင်ငံတော်သည် ဟောပြောရန် မထိုက်တန်ပေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၊ နောင်တနှင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤအရာများသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော သတင်းစကား၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ပစ္စုပ္ပန်အဖြစ်မှန်နှင့် အနာဂတ်ကောင်းချီးများဆိုင်ရာ ကတိတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောရိန္သုမြို့တွင် ပေါလုသည် ခရစ်တော်နှင့် ကားစင်တင်သတ်ခြင်းမှလွဲ၍ ဘာမျှမဟောခဲ့ပေ။1. ကောရိန္သု 2,2) တမန်တော် ၂8,23.29.31 ရှင်ပေါလုသည် ရောမမြို့တွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်း၊ ယေရှုနှင့် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း နှစ်ရပ်စလုံးကို ဟောပြောခဲ့ကြောင်း လုကာက ပြောပြသည်။ ဤအရာများသည် တူညီသောခရစ်ယာန်သတင်းစကား၏ ကွဲပြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ဆုလာဘ်ကြောင့်သာမကသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်ကာလနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ပုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ငါတို့၏ဘုရင်၏သွန်သင်ခြင်းနှင့်အညီယခုတွင်နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်ဘုရားသခင့်အုပ်ချုပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်၏အတွေ့အကြုံ၌ပစ္စုပ္ပန်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပြီး၊ ကမ္ဘာမြေကြီးသည်သခင်ယေရှုနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာနှင့်ပြည့်နှက်နေမည့်နိုင်ငံတော်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမည့်အနာဂတ်ကာလအတွက်ယုံကြည်ခြင်း၌မျှော်လင့်လျက်နေ၏။